जनताको जलविद्युत: त्रिशुलीको सेयर चैत... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
जनताको जलविद्युत: त्रिशुलीको सेयर चैत ७ देखि खुल्ने
जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो पटक त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको सेयर खुल्ने भएको छ।
चैत ७ गतेदेखि सर्वसाधारणतर्फको ३७ लाख ५ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन माग गरिएको छ। सोमध्ये १ लाख ११ हजार १५० कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि छुट्याइएको छ। इच्छुक लगानीकर्ताले चाँडोमा चैत ११ गतेसम्म र ढिलोमा वैशाख ६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।
जति रकमको सेयर माग गरिएको छ सोको १० प्रतिशत रकम आवेदनका साथ बुझाउनुपर्नेछ। बाँकी ९० प्रतिशत रकम कम्पनीले पछि माग गर्नेछ। प्रतिकित्ता १ सयका दरले कम्तीमा १ सय कित्ता र बढीमा १० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ।
अधिकृत पुँजी २ अर्ब ५० करोड रहेको कम्पनीको जारी पुँजी २ अर्ब ४७ करोड छ। संस्थापकहरुबाट सम्पूर्ण रकम चुक्ता भइसकेको कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५१ करोड रहेको छ। कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र टेलिकम रहेको छ।
कस्तो छ कम्पनीले बनाउने आयोजना ?
कम्पनीले नुवाकोट तथा रसुवा जिल्लाको सीमामा बग्ने नदीबाट माथिल्लो त्रिशुली ३ बी जलविद्युत आयोजना बनाउनेछ। सो आयोजनाको क्षमता ३७ मेगावाटको छ। व्याजबाहेक ७ अर्ब ४४ करोड लागत लाग्ने अनुमान छ।
निर्माण अवधिभरको व्याजसहित आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २२ करोड २३ लाख लाग्ने अनुमान छ। यद्यपी सो लागतमा विदेशी बिनिमयदरले असर पार्न सक्ने चुनौति रहेको आह्वान पत्रमा औंल्याइएको छ। निमाृण कार्य सकिँदासम्म लागत थपिन सक्ने चुनौति रहेको औंल्याइएको छ।
कम्पनीले नविल बैंक, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र नेपाल बैंकसँग ऋण सम्झौता गरेको छ। आयोजनाको २८ प्रतिशत प्रगति भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ।
बन क्षेत्र प्राप्ती र रुख कटानको काम सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै आवास तथा कार्यालय भवन निर्माण, प्रवेश मार्ग निर्माण, आयोजना सडक, निर्माण उपकरण तथा सामाग्रीको परिचालन, मुख्य सुरुङ तथा पावर हाउसको निर्माण समेत सुरु भएको कम्पनीले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट कम्पनी नाफामा जाने प्रक्षेपण गरिएको छ। आव २०७९÷८० मा कम्पनीले ४ अर्ब खुद नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरिएको छ। सो आवमा प्रतिसेयर आम्दानी ३३ रुपैयाँ ८३ पैसा, प्रतिसेयर नेटवर्थ १२४ रुपैयाँ तथा इक्वीटीमा प्रतिफल २७ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
यद्यपी आयोजनाको क्रेडिट रेटिङ भने गरिएको छैन। जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजनालाई क्रेडिट रेटिङ गराउन नपर्ने व्यवस्थापछि रेटिङ नगरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
सेयरका लागि कहाँबाट दिने आवेदन ?
लगानीकर्ताले आफ्नो खाता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था (आस्बा सदस्य)बाट आवेदन दिन सक्नेछन्। आस्बा सदस्य सम्पूर्ण बैंकका शाखामा निशुल्क फारम पाइन्छ। ग्लोबल आइएमई बैंकको जमल शाखा तथा त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको कार्यालय बनस्थलीमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १, २०७५, ०४:३९:००